MM Live, Author at MM Live News
Author: MM Live
တပိုတှဲလအတှကျ စီးပှားလာဘျလာဘပှငျ့လနျးပွီး မိမိလိုရာဆုတောငျးနိုငျသော အကောငျးဆုံးယတွာ
January 25, 2020 MM Live
တပိုတွဲလ အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ တပိုတွဲလဆန်း(၁)ရက်နေ့(25.1.2020)မှ တပိုတွဲလကွယ်နေ့(22.2.2020)အထိ တစ်လတာလုံး သစ္စာနီပန်း မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ကပ်လှူပူဇော်ရမည်။ ဘုရား ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ဂါထာအား ပုတီးစိပ်ရမည်။ တပိုတွဲလ တစ်လတာအတွင်း ကိုယ်ရော စိတ်ပါကျန်းမာ ချမ်းသာရပါလို၏။ မိမိလိုရာဆုတောင်းနိုင်သည်။မည်သည့်နေ့နံသားမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကြောင်း။ ဤယတြာအစီအရင်သည် အလွန်အစွမ်းထက်ထိရောက်သောကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်မည်ဆိုပါက စီးပွားလာဘ်လာဘပွင့်လန်းပြီးမည်သည့်အခက်အခဲများမဆို ကောင်ခြင်းမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေသား။ ၇ရက်သားသမီးများအားလုံး ကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေ….။ ဗေဒင်နှင့်အထူးယတြာပေးပညာရှင် / ဆရာပေါက်ကျိုင်း / 09776478912 unicode တပိုတှဲလ အတှကျ အကောငျးဆုံးယတွာ တပိုတှဲလဆနျး(၁)ရကျနေ့(25.1.2020)မှ တပိုတှဲလကှယျနေ့(22.2.2020)အထိ တဈလတာလုံး သစ်စာနီပနျး မွတျစှာဘုရားရှငျအား ကပျလှူပူဇျောရမညျ။ ဘုရား ဂုဏျတျော(၉)ပါး ဂါထာအား ပုတီးစိပျရမညျ။ တပိုတှဲလ တဈလတာအတှငျး ကိုယျရော စိတျပါကနျြးမာ ခမျြးသာရပါလို၏။ မိမိလိုရာဆုတောငျးနိုငျသညျ။မညျသညျ့နနေံ့သားမဆိုလုပျဆောငျနိုငျပါကွောငျး။ ဤယတွာအစီအရငျသညျ အလှနျအစှမျးထကျထိရောကျသောကွောငျ့ ယုံယုံကွညျကွညျလုပျမညျဆိုပါက […]
အခြိနျတိုအတှငျး ဆိုငျခှဲအမြားဆုံး စံခြိနျတငျသှားတဲ့ ဇှဲထကျ စိနျရှရေတနာဆိုငျရဲ့ အဓိကကတြဲ့ လြို့ဝှကျခကျြ
အခြိနျတိုအတှငျး ဆိုငျခှဲအမြားဆုံး စံခြိနျတငျသှားတဲ့ ဇှဲထကျ စိနျရှရေတနာဆိုငျရဲ့ အဓိကကတြဲ့ လြို့ဝှကျခကျြ ကြောကျသံပတ်တမွား စိနျရှရေတနာတှဟော ခတျေအဆကျဆကျ လူတှရေဲ့ အမွတျတနိုးတနျဖိုးထားစရာတှဖွေဈခဲ့ပွီး အခုခတျေမှာဆိုရငျ စိနျရှရေတနာတှကေို ပုံစံအမြိုးမြိုး ဒီဇိုငျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ဆနျးသဈလှပစှာ ထုဆဈရောငျးခနြတေဲ့ ရှဆေိုငျတှကေ ကမ်ဘာ့နရောအနှံ့အပွားမှာ မြားပွားစှာတညျရှိနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာမှာဆိုရငျ Catier ရှဆေိုငျ၊Tiffany and Co. စတဲ့ လကျဝတျရတနာဆိုငျတှကေ ထိပျတနျး နာမညျအကွီးဆုံးအဖွဈ နရောယူထားသလို မွနျမာမှာဆိုရငျတော့ တဈနိုငျငံလုံးက ယုံကွညျစိတျခစြှာ အားပေးဝယျယူကွတဲ့ နိုငျငံကြျော ဇှဲထကျစိနျရှရေတနာဆိုငျကွီးက ထိပျဆုံးမှာ နရောယူထားတယျဆိုရငျမမှားပါဘူး။ နိုငျငံကြျော ဇှဲထကျ စိနျရှရေတနာဆိုငျဟာ တဈနိုငျငံလုံးက စိနျရှရေတနာခဈြသူတှေ ယုံကွညျအားထားရတဲ့ ထိပျဆုံးက ရတနာဆိုငျကွီးအဖွဈရပျတညျနနေိုငျတဲ့ လြို့ဝှကျခကျြတှကေိုအားလုံးက စိတျဝငျစားနကွေမှာ အမှနျပါပဲ။ အဲ့ဒီ လြှို့ဝှကျခကျြတှကေတော့ လကျရှိ ဆိုငျခှဲကိုးဆိုငျစလုံးက ဝနျထမျးတှကေ […]
ထနျးပငျပျေါ၌ တကျပုနျးနသေောတရာခံအား ထနျးပငျလှဲပွီး ဖမျးဆီး (ရုပျသံ)
January 24, 2020 MM Live
၁၃နှစ်သမီးလေးကို သားမယားပြုကျင့်ပြီးထန်းပင်ပေါ်၌ တက်ပုန်းနေသောတရာခံအား ထန်းပင်လှဲပြီး ဖမ်းဆီး (ရုပ်သံ) 18.1.2020ရက်နေ့ညနေ့၈နာရီခန့်တွင် လောင်းလုံးမြို့နယ် ထောင်းနီကျေးရွာတွင် ၁၃နှစ်၅လအမျိုးသမီးငယ်အား သားမယားပြုကျင့်ပြီး တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးကာ ပေ(၄၀)ကျော်ခန့်အမြင့်ရှိ ထန်းပင်ပေါ်၌ …… တက်ပုန်းနေသောတရာခံအား လောင်းလုံးရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထားဝယ်ရဲစခန်းမှနယ်ထိန်းအရာရှိနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ.ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေပါ ပူးပေါင်း၍ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် အတူဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။ Credit to မင်းတခေတ် မုဒိန်းကောင်ထန်းပင်နှစ်ပင်ခုန်သွားတာလေးကြည့်လိုက်ပါ …. ရုပ်သံကြည့်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. Unicode ၁၃နှဈသမီးလေးကို သားမယားပွုကငျြ့ပွီးထနျးပငျပျေါ၌ တကျပုနျးနသေောတရာခံအား ထနျးပငျလှဲပွီး ဖမျးဆီး (ရုပျသံ) 18.1.2020ရကျနညေ့နေ့၈နာရီခနျ့တှငျ လောငျးလုံးမွို့နယျ ထောငျးနီကြေးရှာတှငျ ၁၃နှဈ၅လအမြိုးသမီးငယျအား သားမယားပွုကငျြ့ပွီး တိမျးရှောငျထှကျပွေးကာ ပေ(၄၀)ကြျောခနျ့အမွငျ့ရှိ ထနျးပငျပျေါ၌ …… တကျပုနျးနသေောတရာခံအား လောငျးလုံးရဲစခနျးမှ စခနျးမှူးနှငျ့ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား ထားဝယျရဲစခနျးမှနယျထိနျးအရာရှိနှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား.ခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှပေါ ပူးပေါငျး၍ ဒသေခံပွညျသူမြားနှငျ့ အတူဖမျးဆီးခဲ့ပါသညျ။ Credit […]
လကျလှနျထားသောငှမြေား ပွနျလညျတောငျးရနျခကျနသေူမြား အတှကျ….
အကြွေးတောင်းယတြာ လက်လွန်ထားသောငွေများ ပြန်လည်တောင်းရန်ခက်နေသူများ အတွက်​- ကွမ်းရွက်သန့်သန် ၂ ရွက်ပေါ်မှာ ရစရာရှိတဲ့လူရဲ့နာမည်ရေး ငွေပြန်ပေးစေလို့ရေးပါ ။ထိုကွမ်းရွက်ကို ဖန်ခွက်တစ်ခုထဲထည့်ပါ။ ပြီးရင် ကလပ်ပေါ်တင်ဆုတောင်းပါ ။ ကြွေးသွားတောင်းသောအခါမှာ ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးမှာ ရစရာရှိသောလူနာမည်ရေးငွေပြန်ပေးစေလို့ရေးပါ ။ညာဘက်လက်ဖဝါးမှာ သြဇာ ၈ ညွန့်ကိုင်ပြီး ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးမှာရေးထားတဲ့စာကို ၉ ချက်ရိုက်ပါ ။ တောင်းရခက်နေသူများ ၂၇ ချက်ရိုက်ပါ ။သြဇာညွန့်ဆောင်သွားမှာ ။အဆင်ပြေကြပါစေလို့ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။စီးပွားဥစ္စာဒီရေ အလားတိုးတက်ကြပါစေ…။ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ကံပွင့်၊လာဘ်ပွင့်စေရန် ယတြာဓါတ်ရိုက်ဓါတ်စင်…. အိမ်ထောင်ရေးတွင် သာယာမှုမရှိသူများ၊ ဖောက်ပြန်နေတယ်ဟု ယူစရသော အိမ်ထောင်ဖက်များ အတွက် အထူးယတြာဓါတ်ရိုက်ဓါတ်စင်… လူမှုရေးတွင် ဘာလုပ်လုပ်အကောင်းအမြင်မခံရ၍ နာမည်ပျတ်နေသူများအတွက် ယတြာဓါတ်ရိုက်ဓါတ်စင်…. ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းနေသူများအတွက် အထူးယတြာဓါတ်ရိုက်ဓါတ်စင်….. ပညာရေးတွင် ကြိုးစားသလောက်အရာမထင်သောသူများ ပညာရေးအတွက် ယတြာဓါတ်ရိုက်ဓါတ်စင်… အမျိုးမျိုးသောပြသနာများကြောင့် တရားဥပဒေ […]
ကပ်ဆေးတဲ့ အထဲ မပါပါစေနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ စစ်ကိုဦးတည်နေတယ်…. တရုတ်မှာ ရောဂါအသစ်ပေါ်နေတယ် ဆေးမရှိသေးဘူးတဲ့… သြစတေးလျှာမှာ တောမီးလောင်နေတာ ဧကဆယ်သန်းကျော်နေပြီ ….. တိရစ္ဆာန် သန်းငါးရာကျော်သေတယ်တဲ့ ….လူတွေလည်း အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ပြီး ထွက်ပြေးနေရပြီ…. အင်ဒိုမှာရေကြီးတာ လူတွေသန်းနဲ ချီပြီး ကိုယ်လွတ်ရုန်းထွက်ပြေးနေရတယ်…. မြန်မာမှာလည်း ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်…. ဒါတွေဟာ ဗုဒ္ဓတရားတော်အရတော့ ကပ်သုံးပါးဆိုက်တာပါပဲ ….. အရင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေထက် အခုတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်နေတာဟာ ကပ်ဘေးကြောင့်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး….. ဘာသာအားလုံးရဲ့ အယူအဆအတိုင်း ဘုရားသခင်ကြောင့်လား ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်လား…. ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အယူအဆအတိုင်း လူသားတေရဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်လားဆိုတာ မငြင်းလိုတော့ပါဘူး…. ကပ်ဘေးကတော့ သူ့ အလုပ်သူလုပ်သွားမှာပါပဲ…. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကာကွယ်ခွင့်ရအောင် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အယူအဆနဲ့ ပဲပြောပါမယ်…. အစာရေစာရှားပါးမယ်…. လက်နတ်ဘေးပေါများမယ်….. ရောဂါဘေး ပေါများမယ်… […]
Level.4အဆငျ့ရောကျပွီ ….
Level.4အဆင့်ရောက်ပြီ …. ကမ္ဘာ ကပ်ဘေးကြီး အသွင်ဆောင်နေပြီ …. ပိုး ၏ အားနည်းချ က် ….. အပူကြောက်သည် …. အရက် ချ င့် ချိန် မှီဝဲပါ …. အရက် မသောက်လျ င် နနွင်း( ဆနွင်း) မကျ ည်းစေ့…ရေနွေးဖြင့် နေ့ စဉ် သောက်ပါ …. ငရုတ်ကောင်းစေ့ ဒယ်အိုးဖြင့်လှော် ၍ တယောက်လျင် တစေ့စားပါ …. တစေ့ထက်မပိုရ….. ကပ်ဘေးကာကွယ်သော လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး စမ တော် တင်ပေးပါမည် …. ရေများများသောက်ပါ ။( အရေးပေါ် အသက်ကယ်ဆေးဝါးများ) 24-1-2020 / […]
လမျးမပျေါတှေ ဘူတာရုံတှသှေားရငျး လာရငျး သကေုနျပွီ…
Zombieland Wuhan မှာ Coronavirusကူးစက် ပြီးသေနေပုံတွေက ကြောက်စရာ…. လမ်းမပေါ်တွေ ဘူတာရုံတွေသွားရင်း လာရင်း သေကုန်ပြီ…. 24.1.2020 သေဆုံးသူ ၂၅ ဦး ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ ၈၅၀ ကျော်ရှိပြီ တရုတ် ဝူဟန်မှာ….. Zaw Oo Ko Wuhuan ရောဂါကြောက်စရာ…. လက်ရှိဖြစိပျက်နေတဲ့ video များ… unicode version Zombieland Wuhan မှာ Coronavirusကူးစကျ ပွီးသနေပေုံတှေ ကကွောကျစရာ…. လမျးမပျေါတှေ ဘူတာရုံတှသှေားရငျး လာရငျး သကေုနျပွီ….. 24.1.2020 သဆေုံးသူ ၂၅ ဦး ရောဂါကူးစကျခံထားရသူ ၈၅၀ ကြျောရှိပွီ တရုတျ ဝူဟနျမှာ…. Zaw Oo Ko Wuhuan ရောဂါကွောကျစရာ…. လကျရှိဖွစိပကျြနတေဲ့ video […]
ရငျကိုထိရှစခေဲ့ပါသော လောကနန်ဒာ ဘုရားဝငျးအနီး ထမငျးဆိုငျက အဖွဈအပကျြလေး…
ရင်​ကိုထိရှ​စေခဲ့ပါသည်​ ယ​နေ့အကြိုက်​ဆုံးပို့စ်​ ​ ​လေးစားထိုက်လို့ လေးစာမိပါတယ် ခင်ဗျာ. . တစ်ခါတရံ အဝေးကြီးကိုမကြည့်ပဲ အနီးလေးကို ကြည့်ပေးပါ…. နေရာ – လောကနန္ဒာ ဘုရားဝင်းအနီး ထမင်းဆိုင် ကျွ န်တော်အလုပ်ကိစ္စပြီးလို့ တပ်ရင်းပြန်လာတော့ နေ့ခင်း ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ထမင်းစားမယ်ဆိုပြီး အနီးအနားက ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ၀င်စားဖြစ်တယ်….. ထမင်းစားနေတုန်း ထမင်းဆိုင်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ မိန်းမကြီး တစ်ယောက်က ကလေးခပ်ငယ်ငယ်ကို ရင်ခွင်ပိုက်ပြီး ဘုရားဖူးလာ ဧည့်သည်တွေ ထမင်းစားကြတုန်း တောင်းရမ်းနေတဲ့ မိန်းမကြီးကို လှမ်းတွေ့လိုက်တယ်…. ဒါနဲ့ ထမင်းစားပြီးပြီလား မေးတော့ မစားရသေးဘူးတဲ့….စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရင်း ထမင်းလာအတူတူစားဆိုတော့ မစားရဲဘူး ထမင်းထုပ်ပြီးပေးပါတဲ့ ….. လာ ၀င်စားလို့ရတယ်….အတင်းခေါ်ပေမဲ့ မလာရဲလို့ လက်ဆွဲခေါ်ပြီး စားချ င်တဲ့ဟင်းနဲ့ ထမင်းတစ်နပ်ကို ကျွေးလိုက်တယ်… ဘယ်မှာနေလဲ […]
မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ ၂၀၂၀ ဇနျနဝါရီလ (၂၄)ရကျမှ ၊ (၃၁)ရကျအတှငျး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျ ၊ သတိပွုရနျ ၊ ယတွာပွုရနျ (၁)ပတျစာ ဟောစာတမျး
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ (၂၄)ရက်မှ ၊ (၃၁)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း) နှင်းမှုန်ဖွေးဖွေး မြောက်လေသွေးသည့် စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလှသော နှစ်သစ်ကူးကာလ ဇန်နဝါရီလ၏နေ့ရက်များ unicode မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ ၂၀၂၀ ဇနျနဝါရီလ (၂၄)ရကျမှ ၊ (၃၁)ရကျအတှငျး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျ ၊ သတိပွုရနျ ၊ ယတွာပွုရနျ […]
“Corona Virus ကူးစကျခွငျးမခံရ‌အောငျ ဒီအခကျြတှကေိုလိုကျနာပါ”
“Corona Virus ကူးစက်ခြင်းမခံရ‌အောင် ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာပါ” တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်ပြည်နယ်က ဟွာနန်ပင်လယ်စာဖြန့်ချီရေးဆိုင်က အလုပ်သမားတွေနဲ့ ဖောက်သည်တွေဆီမှာစတင်တွေ့ရှိရတဲ့ corona virus ဟာအရင်ကတခါမှမကြုံတွေ့ရဖူးသေးတဲ့ အမျိုးအစား (novel virus) လို့သိရပါတယ်။ ပင်လယ်စာကနေစတင်ကူးစက်ဖြစ်ပွားပြီး လူလူချင်းကူးနိုင်တယ်လို့လည်း တရုတ်နိုင်ငံ national health commission ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ ကူးစက်ခံရသူတွေဟာနမိုးနီးယားလိုရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားရလေ့ရှိပြီး ဖျားနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းတွေဖြစ်ပွားလေ့ရှိတယ်။ ဒီ virus ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမတွေ့ရသေးပေမယ့်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ဆေးပါ လက်တွေညစ်ပတ်ပေရေနေပြီလို့ မြင်တာနဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ရေသုံးပြီးဆေးကြောပါ။ ညစ်ပေနေတယ်လို့ မျက်စိနဲ့မမြင်ရရင်တောင် ဆပ်ပြာနဲ့ရေ ဒါမှမဟုတ် လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ ဆေးကြောဖို့လိုပါတယ်။ တခြားသူတွေဆီ မကူးစက်ပါစေနဲ့ ကိုယ့်မှာ အဖျားရှိနေတယ် ….ဒါမှမဟုတ် အေအးမိဖျားနာလက္ခဏာတွေပြနေတယ်ဆို တခြားသူတွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်မနေပါနဲ့။လူအများသွားလာနေတဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းမဲ့တံတွေးမထွေးပါနဲ့။ ဆေးဝါးကုသမှုလည်း ခံယူသင့်ပါတယ်။နှာချေရင် ချောင်းဆိုးရင် လက်ကိုင်ပုဝါ […]